सामाजिक मिडियाको साथ निराश नहुनुहोस् | Martech Zone
सामाजिक मिडियाको साथ निराश नहुनुहोस्
बिहीबार, अगस्ट 11, 2011 शुक्रबार, अगस्त 12, 2011 Douglas Karr
मानिसहरु मध्ये एक म कुरा गर्न सुन्न बाहिर जान्छु जय बेर हो। यस बिहान म सूर्य ड्राइभ गर्न को लागी उठ्नुपर्‍यो ब्लग इन्डियाना उनको मुख्य भाषण सुन्न - र यो यात्रा को लागी राम्रो थियो। त्यहाँ केहि कारणहरू छन्। जेसँग २० बर्षको बजार ब्यवसायिक छ र उनी आफ्नो राय बताउन लाज मान्दैनन्। जे पनि एक वास्तविक व्यक्ति हो - तपाईं मञ्चमा देख्नुहुने र व्यक्तिगत रूपमा तपाईं कसलाई भेट्ने भन्ने बीचमा कुनै भिन्नता छैन। साथै, जेले आधा दर्जन पटक बोलेको देखेर, मैले उही प्रस्तुति दुई पटक देखेको छैन।
म जेलाई विलाप गर्दै थिएँ कि म उत्सुक थिएँ कि मेरो भन्दा धेरै सानो ब्लगहरू धेरै रिट्वीट, लाइक र उल्लेख प्राप्त गर्दै थिए। मैले सोचें, सायद, यदि केहि मान्छेहरूले उद्योग खेल्दै थिए भने। जेले सोचेनन कि तिनीहरू हुन् - उसले आफ्नो ब्लॉगमा एक संख्या रिट्वीट र सामाजिक साझा गर्दछ, विश्वास गर्नुहोस् र रूपान्तरण गर्नुहोस् (पढ्नु पर्छ!)।
म पोष्टको गुणस्तरको कुरालाई विश्वासमा राख्दिन - हामी मार्केटिंग उद्योगमा राम्ररी सम्मान गर्दछौं। जे र मैले कुरा गरिरहेको ट्राफिकको मात्राको बारेमा मैले छलफल गरें र यसको तुलनामा उसको ब्लगले त्यस्तै पाठक वर्ग प्राप्त गर्‍यो। यद्यपि उनका पाठकहरू यसमा अत्यन्त आक्रामक छन् बाढ्नु जे बाहिर राखिएको जानकारी। थोरै रकम होइन - ठूलो रकम… औसतमा २०० पोष्टहरू पोष्ट गर्दछ!
जेको कुनामा उहाँहरूको अविश्वसनीय सामग्री, आफ्नो सञ्जालहरूसँग सञ्चार गर्नमा उहाँको विशेषज्ञता, र चलिरहेको कुराकानीहरू छन्। उनको पनि ट्विटर र फेसबुकमा हामी भन्दा ठूलो फलोइंग छ। चारै तिर, जे मेरो श्रेणी भन्दा माथि केही पट्टिहरू छन्। यदि म क्याप्टन हुँ भने ऊ एक एडमिरल हो। म उसलाई धेरै सम्मान गर्छु।
पाठकहरूका लागि फिर्ता
यो कुरा गर्दै, यो स्पष्ट भयो कि जयलाई पछ्याउने मानिसहरू ठूलो अख्तियारको साथ अत्यन्त सामाजिक छन्। जेलाई पछ्याउने व्यक्ति शीर्ष स्तरमा माथि पनि छन्! जे का धेरै अनुयायीहरुको आफ्नै एक विशाल अनुसरण छ - र तिनीहरु आफ्नो नेटवर्क संग साझा गर्न मन पराउँछन्। यो मेरो दर्शक र जयको बीच भिन्नता हो। म एक प्रकारको पागल र बोल्टको मान्छे हुँ जसले यसलाई खाडलमा मार्केटरहरूसँग लडिरहेको छ। यद्यपि हामी शिक्षाको सबै तह र उद्योग वरिष्ठतालाई मान्छे आकर्षित गर्दछौं ... यो मार्केटिंगको बारेमा ब्लग हो।
जेसँग मार्केटिंगको बारेमा पनि ब्लग छ, तर ऊ मसँग भन्दा धेरै बढि ध्यान केन्द्रित र परिष्कृत छ। हामीले विस्तृत स्वाथ काट्यौं ... बाट सबै विश्लेषण ईमेल मार्केटिंग गर्न। म पुग्ने दर्शकहरु संलग्न छन्, तर मैले लेखेको सामग्री साझा गर्न वा प्रबर्धन गर्न कुनै चाल छैन। मेरा धेरै पाठकहरू ब्रान्ड मार्केटिंग र विज्ञापनमा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्दै सोशल मीडियामा पूर्णतया निष्क्रिय छन्।
यहाँ मेरो कुरा हो। म छोटो अवलोकनमा थिएँ किनकि मैले मेरो सामग्रीको प्रदर्शनको बारेमा रोएको थिएँ। ममा निरुत्साहित हुनु हुँदैन - मलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ कि म पाठकहरूको संलग्न समूहसँग कुरा गर्दैछु जसले अहिलेसम्म सोशल मिडियामा शून्यता गरेका छैनन्। मलाई आशा छ कि म तिनीहरूलाई त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्न सक्छु, तर यो आज वा भोलि नहुन सक्छ, यो धेरै बर्ष पछि हुन सक्छ। तपाईंको नेटवर्क सायद समान हुनेछ, खास गरी यदि तपाईं अनलाइन उद्योगहरूमा हुनुहुन्न भने। तपाईं एक महान सामग्री को एक टन लेख्नु भएको रूपमा निराश नहुनुहोस् तर यो केवल एक मुट्ठी भर मान्छे द्वारा साझा गरीएको छ। सबै हामी जस्ता सामाजिक छैनन्।
कार्यस्थलमा सामाजिक मिडिया नीतिहरू
अगस्ट,, २०१ 12 2011:२१ अपराह्न
धन्यबाद। म त्यस मध्ये कुनै योग्य छैन, तर धन्यवाद।
मैले यो संख्यामा निश्चित रूपमा कहिले पनि चलाएको छैन, र म निश्चित छु कि त्यहाँ आउटलीयरहरू छन्, तर म विश्वास गर्दछु कि यो अपुष्ट रूपमा साँचो छ। के म ब्लग गर्नेहरूलाई मेरा ग्राहकहरू भन्छु कि तपाईंको सामग्री फोकस त्यति नै संकुचित हुन्छ, तपाईंले अधिक साझेदारी गर्ने र सदस्यता व्यवहार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने पाठकलाई तपाईंले उनीहरूको अवस्थाको बारेमा सिधा कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्छ। ट्रेड अफ यातायात छ।
ब्रोडर = बढी आगन्तुकहरू, कम साझेदारी + सदस्यताहरू
संकीर्ण = कम विजिटरहरू, अधिक साझेदारी + सदस्यताहरू
धिक्कार छ, अब म यस बारे मा एक ब्लग पोस्ट पनि लेख्नु पर्छ! धन्यवाद नज DK को लागी धन्यवाद। तपाईंलाई जहिले पनि देख्न पाउँदा ठूलो छ!
यो निश्चित अर्थमा बनाउँछ, जे! पोष्टको लागि हेर्दै चाँडै केहि मेजकल ब्ल्यान्को प्राप्त गरौं।
अगस्ट,, २०१ 15 2011:२१ अपराह्न
ट्विटर बौद्धिक र सामाजिक "ट्विटरटी" को एक खेल मैदान रहन्छ। म मार्केटिंग / सामाजिक / टेक स्पेस मा एक सय भन्दा बढी मान्छेहरु लाई पछ्याउँछु, र सबै जानकारी को संसाधित गर्न यो अलि गाह्रो हुन सक्छ। रीट्वीट गरिएको सामग्रीको अधिक धेरै सानो सबसेटबाट emanates। एकत्रीकरणको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, कसरी हामी यसलाई इग्र्याग्रेसनको नाम परिवर्तन गर्छौं। ट्विटरमा डिक कोस्टोलोलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु "जनतालाई ट्विटर निकाल्नुहोस्, विशाल धुने धुनहरू, मलाई 400०० करोड ट्विटर प्रयोगकर्ता दिनुहोस्, र त्यसपछि प्रभावकारी राजस्व मोडेलको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।" तर जब यो तपाईं मान्छेहरू के गर्दै छन् भन्ने कुरा आउँछ, तल्लो रेखा भनेको तपाईंले नियमित आधारमा उपयोगी, सोच्ने उत्तेजक अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुपर्नेछ। र (ड्रम रोल) तपाईंले, दर्शकहरूसँग कमेन्टरी मार्फत, घटनाहरूमा, कहिँ पनि अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। वास्तवमा, धेरै केसहरूमा मैले पढेका टिप्पणीहरूमा उनीहरूसँग धेरै नै राम्रो चीजहरू हुन्छन्। यो हाम्रो धेरैको वास्तविकता जस्तो गुटको श्राप र आशिष् हो।